FactGem: Sanganisa Dhata Sosi muMaminetsi… Hapana Kodhi Inodiwa! | Martech Zone
Svondo, October 8, 2017 Douglas Karr
Dhata iri mune silos. Bhizinesi neIT zvese zviri kuda kuona kubatana kwe data kubatsira kupa mhinduro kumatambudziko ebhizinesi anhasi. Mishumo inopa maonero akabatana pane data rakabatanidzwa anodiwa kuitira kuti vanhu vatarise ruzivo rwakakosha kumasangano avo uye runovimbisa kuvimba mukugona kwavo kuendesa uye kuburitsa ruzivo rwechokwadi rwakakosha pakubudirira kwekambani.
Dhata, zvisinei, inopararira pamatanho mazhinji ehukama, mainframes, masystems, zvinyorwa zvemuhofisi, zvinongedzo zveemail, nezvimwe. Nekuti dhata haina kusanganiswa uye mabhizinesi achiri kuda ruzivo rwakabatana, d mabhizinesi anoita "swivel-sachigaro" kusanganisa uye kugadzira "kutarisisa uye kuenzanisa" mishumo. Ivo vanobvunza imwe silo uye vanoteedzera zvawanikwa kuti vabudirire, vachibvunza imwe silo uye unama data kakawanda. Ivo vanodzokorora maitiro aya kudzamara vaine chimwe chinhu chinomiririra chirevo chavanoda kwazvo kugadzira. Rudzi urwu rwekuzivisa runononoka, bhuku, harina kuvimbika, uye kukanganisa kunowanzoitika!
Masangano mazhinji anobvuma kuti maturusi nematekinoroji zvakagadzira dambudziko re data silo hazvigone kushandiswa mumhinduro. Nekuda kweizvozvo, kwemakore mashoma apfuura, taona kuwanda kweNoSQL dhatabhesi uye matekinoroji achiendeswa kubatsira kubatanidza dhata nekukurumidza uye nekuwedzera kugwinya. Nepo aya madhatabhesi matsva ane simba uye mapuratifomu achikwanisa kudzikisira nguva mukubatanidza dhata uchienzaniswa nemaitiro echinyakare, ese ari ekuvandudza-centric uye anounza neimwe seti yezvinetso izvo zvinofanirwa kukurirwa kana zvasvika pakuwana hunyanzvi hwakakosha kukudziridza uye shanda nematekinoroji aya. Kune akawanda zvipingamupinyi zviripo mune ino maitiro kusanganisira kugadzirisa shanduko manejimendi uye maitiro ebhizinesi kuti ubudirire mukuendesa mhedzisiro.
FactGem inopa nzira yekubatanidza dhata pasina kunyora chero kodhi. Ivo vanotenda kuti panofanira kuve nenzira iri nyore yekubatanidza data, uye iripo. Vakazvisika!
Chikwata cheinjiniya kuFactGem chakatora mutoro wekubata kuomarara kwekubatanidza kuitira kuti vashandisi vebhizinesi vasafanira kudaro. Zvino, hurukuro yekubatanidza dhata haifanirwe kutanga neIT. Nekuda kweizvozvo, FactGem's data yekubatanidza manyorerwo anogona kushandiswa kukurumidza kusanganisa masiposi e data kuendesa mishumo yakabatana pane yakambodimburwa dhata.
Izvo zvinosvika apa ndezvekuti takagadzirisa iri dambudziko risingagone kubva kune tech tech, asi izvo zvatiri kunyatso kupa iri bhizinesi mhinduro. CEO Megan Kvamme
Kana uchisanganisa data, ivo vanotanga nekufungidzira kuti data rako ratove rakateedzerwa. Vakangwara kwazvo vanhu musangano renyu, uye pamwe vatengesi vamakatenga kunyorera uye mhinduro, vakagadzira aya mamodheru. Masangano nehukama hwaunofarira uye unoda kubatanidza kurarama mune yako data silos. Ivo vanotaridzika sevatengi, maodha, kutengeserana, zvigadzirwa, zvigadzirwa zvigadzirwa, vanopa, zvivakwa, uye zvimwe. Ivo vanoda kuvhura iyo data mune aya masangano uye kuvabatanidza ivo kuita mushumo unounza zvine musoro bhizinesi nzwisiso. NeFactGem, iri ibasa rakareruka.
Kana iwe uchikwanisa kudhirowa masisitimu uye hukama hwesangano rako pa whiteboard, unogona kushandisa FactGem kubatanidza yako data. Zviri nyore kudaro.
Kubatanidza dhata neFactGem, tanga neWhiteboardR. Muchiitiko ichi, dhonza uye udonhedze masangano nehukama kuti ugadzire zvine musoro modhi yedhijitari yakabatanidzwa ne "whiteboarding" iyo mubrowser. MuWhiteboardR, tsanangura hunhu hwaunoda kushamwaridzana nechinhu chimwe nechimwe, uye iwe unofanirwa kungoenzanisira zvaunoda, sezvaunenge uchizvida. Haufanire kuziva chega chega hunhu hwakabatana nechinhu chose usati watanga. Iwe haufanire kuziva ese masosi uye masosi iwe aunopedzisira uchida kubatanidza. Maitiro akanyanya kunaka kutanga nekugadzira modhi yemasilosi mashoma iwe aunoziva anogona kupa mushumo wakabatanidzwa - uye kukosha kwekukurumidza kune rako bhizinesi. Mepu kunze kwezvinhu zvako, hunhu hwavo, uye hukama hwavo kune mumwe nemumwe. Iwe unogona kutogadzira mitemo yebhizinesi kutsanangura izvo zvinoita kuti chinzvimbo chisarudzike uye kuti hunhu hwehukama hwayo hunofanira kuve hwei maererano nezvimwe zvinhu zvine hukama. Kana kodhi iyi yagadzirwa, iwe unotumira iyo modhi kuti ikwanise kushandiswa muMappR.
Ipo WhiteboardR ichikubvumidza kushandisa chishandiso kutsanangura yakasanganiswa, yakabatana, bhizinesi-rakakura bhizinesi modhi, MappR inokutendera iwe mepu dzakasiyana dzakasiyana masilos e data kune yakabatana WhiteboardR modhi. MuMappR, unogona kuteedzera dhata sosi uye wotanga kugadzira mappings. Ngatitii mune imwe sosi kubva kune imwe silo une hunhu cust_id uye mune imwe siro, une hunhu nhengo_id, uye iwe unoziva izvi zvese zvinoreva mutengi. Na MappR, unogona mepu zvese izvi hunhu kune chakabatana hunhu mutengi_id iwe watove wakatsanangura mune yakabatana WhiteboardR modhi. Kana ukangotara mepu hunhu hwaunofarira nezve sosi, MappR inogona kubva yaunza mafaera kubva kune iyo silo uye inozozvibatanidza otomatiki muiyo WhiteboardR modhi uye anobva angobvunzwa mukubatana. Unogona kuenderera pamepu sosi uye ingest data nenzira iyi kusvikira iwe wabatanidza iyo data iwe yaunoda kune yako yakabatana maonero.
NaWhiteboardR uye MappR, unogona kana kusevha, vhezheni, uye kutumira kunze mamodheru aunogadzira. Aya mamodheru ane kukosha pakuti ivo vanova rin'i rekodhi yekubatsira bhizinesi uye IT kutaurirana kwavo kunzwisisa kwedata resangano, mashandisirwo aro, uye mashandisirwo aro pamasosi. Aya mamodheru anogona zvakare kushandiswa kubatsira kuzivisa nyowani dhata deployments uye kuisazve mapuratifomu matanho ekubatsira kuvimbisa kwavo kubudirira.
Kamwe data parakatakurwa, BuildR inokutendera kuti ugadzire nekukurumidza, inotsvaga dhibhodhi pane yako data rakabatana mubrowser. ConnectR inokutendera iwe kuendesa yewebhu dhata yekubatanidza yeTafurau uye mamwe maturusi eBI kuitira kuti iwe ugone zvakare kuwedzera aya maturusi ekuzivisa pane yako ikozvino-yakabatana data.
Nekuti FactGem inoita kusimudza kwakanyanya kwekubatanidzwa kwedata, uye nekuti iwe unofanirwa kungoenzanisira uye mepu izvo zvaunoda, sezvaunenge uchizvida, kubatanidzwa kwedata uye kuendesa nzwisiso inokurumidza zvinoshamisa. Izvi zvinotaridzika sei muhupenyu chaihwo?
Hezvino Izvo Zvakajairika ChokwadiGem Dhata Kubatanidzwa Kunotaridzika Senge:
Zhizha rapfuura, Fortune 500 Retailer akaenda kuFactgem, achikumbira rubatsiro nekuti vaishandisa hofori CRM uye vachidhonza data kubva kune dzimwe nzvimbo kuyedza kuwana nzwisiso. Ivo Chief Data Scientist vaida kusanganisa zviri nyore zvitoro, e-commerce uye ruzivo rwevatengi dura kuti vanzwisise "Ndiani mutengi?"
FactGem yakavimbisa kuendesa mumaawa makumi maviri nemana. Vakavaka modhi yakabatana pane zvese zvitoro nevatengi, vakaburitsa njere nyowani, uye vakazviita mumaawa matanhatu, kwete makumi maviri nemana! Uye saka. . . Mutengi # 24 mukutengesa akazvarwa. Ivo vatama kubva pakutarisa kune rimwe guta mumaawa matanhatu kuenda kutarisa nyika, pamusoro pezviuru zvezvitoro, makumi emamiriyoni evatengi uye terabytes yedata - uye vachiita izvi zvese muzuva rezuva. Vamwe mune vekutengesa, vezvemari, uye kugadzira ivo vava kutanga kuona nekuona zvakanakira FactGem mumasangano avo.
Tekinoroji yakafambira mberi kusvika padanho parinofanira kunge risiri iro rega kuona kweinjiniya. Yemazuva ano data yekubatanidza haina kuomesa seyako IT department ingade kuti iwe utende. CTO Clark Richey
FactGem's WhiteboardR module inobatanidza yakaparadzaniswa sosi dhata pasina kushandisa chero kodhi.
Shanyira FactGem Kuti Udzidze Zvakawanda
Tags: Clark Richeykubatanidzwa kwedatachokwadikusanganamapprMegan Kvammewhiteboardr